बिना कारण थकान महसुस गर्नुहुन्छ ? यस्तो हुनसक्छ कारण – Wire Nepal
तपाई प्राय सधै थकित भइराख्नु हुन्छ? हरेक समय थकान महसुस गर्नुहुन्छ? तपाईलाई आरोप लाग्न सक्छ – व्यस्त जीवनशैली थकानको कारण हो। त्यसो भए जीवनशैली परिवर्तन गर्नुस। एक हप्तासम्म समयमै पहिला भन्दा धेरै सुत्नुस्। खानपानमा ध्यान दिनुस्। व्याम गर्नुस्। तैपनि तपाइको […]
तपाईलाई आरोप लाग्न सक्छ – व्यस्त जीवनशैली थकानको कारण हो। त्यसो भए जीवनशैली परिवर्तन गर्नुस। एक हप्तासम्म समयमै पहिला भन्दा धेरै सुत्नुस्। खानपानमा ध्यान दिनुस्। व्याम गर्नुस्। तैपनि तपाइको थकाइ घटेन।
अब आफैलाई प्रश्न गर्नुस ‘ म किन थकान महसुस गरिरहेको छू।’ जवाफ केही पाउनु भएन। तपाइलाई लाग्छ तपाइमा केही समस्या नै छैन।
कलेजोमा देखिएको समस्याले पनि मानिसहरुलाई अत्यधिक थकान महसुस हुन्छ। रगत लिँदा, कोकिन या त्यस्तै प्रकारका लागूऔषध लिने मानिसमा हेपाटाइटिस सी हुने सम्भावना हुन सक्छ। हल्का ज्वरो आउने, भोक नलाग्ने, शरीरमा पीडा हुने या रुघा लाग्नेजस्ता लक्षण यस्तो हुदाँ देखिन्छ। ‘लिभर फङसन टेस्ट’ गराए सम्भावित जोखिमबाट बच्न सकिन्छ।
नेपाल आज युएईसँग दोस्रो खेल खेल्दै, कस्तो रहला प्रदर्शन ?